हर्न बजाउने ३४ हजार सवारीसाधन कारवाहीमा – Medianp
हर्न बजाउने ३४ हजार सवारीसाधन कारवाहीमा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०१, २०७५१२:१७
काठमाडौँ, १ चैत । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउने ३४ हजार ३७ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विसं २०७४ वैशाखदेखि हालसम्म उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउने उक्त सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको हो । महाशाखाले उपत्यकाभित्र ध्वनि प्रदुषणको समस्या गम्भीर रूपले बढेर उपत्यकावासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न थालेपछि विसं २०७४ वैशाख १ देखि हर्न निषेध गरेको हो ।
महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त पन्तले उपत्यकावासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी खतरनाक घुम्तीमा बाहेक अन्य स्थानमा हर्न पूर्णरूपमा निषेध गरिएको बताउनुभयो । “उपत्यकामा धेरै सवारीसाधनसँगै हर्न बजाउने सवारीसाधनको सङ्ख्या बढेको छ, त्यसैले महाशाखाले जथाभावी हर्न बजाउने सवारीसाधनलाई कडाइ गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ विपरीत ध्वनि प्रदुषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमा नै रोक लगाउन वातावरण विभागलाई सिफारिशसमेत गरेको छ । महाशाखाले ध्वनि प्रदुषण गरेवापत एउटा सवारीसाधनबाट रु ५०० कारवाहीस्वरुप लिँदै आएको छ ।
निक जोनसको गीत बिलबोर्डको १ नम्बरमा परेपछि प्रियंकाले पाइन् यति महंगो कार उपहार, मूल्य कति ?
सांसदद्वारा दश लाखको अक्षयकोष
दुवै खुट्टा नचलेपछि हात टेकेरै ६ किलोमिटर टाढा रहेको स्कुल पुग्छन् यी आठ वर्षीय बालक ! बन्दै प्रेरणाका पात्र
मन्त्रीपद जोगाइदिन बुहारीले रुँदै इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेपछि प्रचण्डद्वारा भिटो प्रयोग !